GOTHICC ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် DUKE MEMES ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါတို့ကျောင်းတွင်အရေးကြီးသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်စေသနည်း - နှုန်းထားများ
Duke သည်နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားကောလိပ်များကဲ့သို့ပင် Duke သည်ကျောင်းသားများ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ များကိုနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးတတ်သည်။
ဒါအမှန်ပဲ။ Gothic ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် Duke Memes ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လူကြိုက်များလာသည်။ ဤအုပ်စုမှတဆင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအဓိကပြproblemsနာသုံးခုရှိသည်။
ငါ၏အ moms ကားတစ်စီး vroom vroom ၌တည်၏
မိဘများတနင်္ဂနွေတွင် Blue Devil Days (အထက်တန်းကျောင်းသားများမှဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ Duke သို့လာရောက်လည်ပတ်စဉ်) ကဲ့သို့သော visitors ည့်သည်များအားအထင်ကြီးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် Duke သည်အသစ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောမြက်ပင်များရရှိခြင်းကိုဝေဖန်ကြသည်။ စသည်တို့
လို, Barneys လိုတဲ့ဘတ်စ်ကားဝင်တိုက်ရရှိ
ကတင် ကိုးလ်ဝီလျံ အပေါ် ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာ 14, 2017
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောပညာရေး၊ ကောင်းမွန်သောအစားအစာ၊ အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းများရရှိရန်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၇၀,၀၉၂ ပေးရသည်။
ကတင် Carly mcgregor အပေါ် အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 22, 2017
ကျနော်တို့ Duke ရဲ့အံ့သြဖွယ်အဆောက်အ ဦ များနှင့်လှပသောဗိသုကာတန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆောက်လုပ်ရေးဘယ်တော့မှရပ်တန့်။
စီမံကိန်းတစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကချက်ချင်းပဲစပါတယ်။ ထိုသို့လေထုညစ်ညမ်းမှု, အသံညစ်ညမ်းမှု, ကွဲပြားခြားနားသောအိပ်ဆောင်များတွင်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့နှင့်လူတန်းစားဖို့လမ်းအပေါ်တစ်ခုလုံးကိုယာဉ်ရပ်နားအများကြီးမှတဆင့်အစားန်းကျင်သွားကြဖို့ရှိခြင်း၏အဆင်မပြေပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး, သင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကျအတန်းစေ!
Gooood နံနက်! အဆိုပါကျောင်းဝင်းနှင့်အတူအသကျရှငျသည် ...
ကတင် Youlim Kim အပေါ် အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2017
ငါတို့ချစ်သောထမင်းစားခန်း West Union ကိုမကြာသေးမီက Broadhead Center ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခင်သမ္မတဟောင်းရစ်ချတ်အိပ်ချ်။ ဘရော့ဒ်ဒ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ နှင့်အညီ, Duke ကျောင်းသားများအနည်းငယ်ပျော်စရာအဘို့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မနိုင်။
ကတင် အလက်ဇန္ Premont အပေါ် ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 31, 2017
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်။ WUSad သည်သာတုံ့ပြန်မှု & # x1f622
ကတင် ယောန Santiago အပေါ် တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 3, 2017